Akụkọ - ịzụ anụ ọkụkọ 2021, nnukwu mgbanwe abụghị ahịa, kama nri ……
2021 ịzụ anụ ọkụkọ, nnukwu mgbanwe abụghị ahịa, kama nri ……
N'ezie, ugbu a, mgbake ahịa ọkụkọ nwekwara ike gbakọọ. Ọnụahịa nke ọtụtụ anụ ọkụkọ erutela n'ogo nke otu oge n'afọ ndị gara aga, ụfọdụ dị elu karịa ọnụ ahịa nkezi n'afọ ndị gara aga. Mana n'agbanyeghị nke ahụ, ọtụtụ ndị mmadụ enwebeghị mkpali ịmụ nwa, nke ahụ bụ n'ihi na ọnụ ahịa nri arịala nke ukwuu n'afọ a.
Dịka ọmụmaatụ, anụ ọkụkọ ajị anụ nwere anụ ọhịa, lee ọnụahịa nke ọkụkọ ajị anụ naanị, ugbu a karịa 4 catty, mara ezigbo mma. Ọ bụrụ na etinyere ya n'afọ ndị gara aga, uru onye ọrụ ubi a bara nnukwu uru. Mana afọ a, n'ihi ọnụ ahịa nri dị elu, ọnụ ahịa ịzụ otu kilogram ọkụkọ eruola yuan 4.
Dabere na ndekọ ọnụ ọgụgụ, ugbu a 4.2 yuan banyere otu anụ ọkụkọ ajị anụ anụ, ọ fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ọnụ ahịa ya, oke uru ya pere mpe, ọnweghị oke nlanarị, yana obere mfu.
Ya mere, n'afọ ọzọ ọkụkọ ozuzu, ole uru, n'ụzọ dị ukwuu na -adabere na -emekarị nke ndepụta ahịa. Ahịa ọkụkọ nwere ike ịdị mma ma ọ bụrụ na enweghị ihe ịtụnanya, mana ọnụ ahịa nri dị iche.
Iji nyochaa usoro ọnụ ahịa nri afọ na -abịa, ọ dị anyị mkpa ịmalite site na isi ihe ole na ole so kpata oke mmụba n'ahịa oriri. Ọtụtụ ndị mmadụ mara na kpọmkwem ihe kpatara mmụba ọnụ nri afọ a bụ ọnụ ahịa ihe oriri dị ka ọka na nri soybean, mana nke ahụ bụ naanị otu n'ime ihe kpatara ya.
N'ezie, ọka nke afọ a bụ nnukwu owuwe ihe ubi, mmepụta ọka nke mba dị elu karịa afọ gara aga. Mana gịnị kpatara ọnụ ahịa ji rịa elu mgbe ihe ọkụkụ ọka bara ụba? E nwere ihe atọ kpatara ya.
Nke mbụ, emetụtala mbubata ọka. N'ihi ọrịa na -efe efe, emetụtala azụmahịa mbubata na mbupụ n'afọ a, ọka abụghịkwa otu. N'ihi nke a, mkpokọta ọka a na -akpachapụrụ anya ga -ebute ihe ubi ọhụrụ nke afọ a.
Nke abuo, n'ime afọ gara aga, mmepụta ezì anyị agbakeela nke ọma, yabụ na agụụ nri dịkwa oke elu. Nke a kwalitere ọka, soybean na ihe oriri ndị ọzọ na -emepụta nri.
Nke atọ bụ ịkpakọba mmadụ. N'ịtụ anya ịrị elu ọnụ ọka, ọtụtụ ndị ọchụnta ego na -akwakọba ọka ma na -eche ọnụ ahịa ga -arị elu karịa, obi abụọ adịghị ya na ọ na -ebuli ọnụ ahịa.
N'elu bụ ọnụahịa nri afọ a, ọnụahịa ọka na -arị elu ihe ole na ole dị mkpa. Mana n'eziokwu, ọnụ ahịa nri na -arị elu ọ bụghị naanị n'ihi mmetụta ịrị elu ọka, kamakwa ihe dị oke mkpa, nke ahụ bụ "mmachibido nke iguzogide".